‘दयाहाङको बौद्धिकता मनपर्यो’ : अभिनेत्री शान्ति वाइबा – NamoBuddha Khabar
‘दयाहाङको बौद्धिकता मनपर्यो’ : अभिनेत्री शान्ति वाइबा
बिहिबार, कार्तिक २३, २०७४ | १६:४५:१४ |
अभिनेत्री शान्ति वाइवा यतिबेला निकै व्यस्त छिन् । उनी अभिनित फिल्म ‘नीरफूल’ यतिबेला धमाधम छायांकन भइरहेको छ । सेलो प्रोडक्शनको ब्यानरमा निर्मित फिल्ममा उनी चर्चित नायक दयाहाङ राईसँगै देखिदै छिन् । यसअघि दुईवटा फिल्ममा दयाहाङसँग स–साना भुमिकामा देखिसकेकी उनी संचारकर्मी एवं साहित्यकार फूलमान वलले निर्देशन गरिरहेको फिल्म ‘नीरफूल’मा भने दयाहाङसँगै लामो भुमिका देखिन लागेकी हुन् ।
काभ्रेको देउपुर बालुवापाटी, बतासेमा जन्मेकी वाइवाले नाटकबाट अभिनय यात्रा थालेकी थिइन् । ७ बर्ष अघि नाटक ‘हाम्रो एउटै आँगन’बाट अभिनय शुरु गरेकी उनले ‘सुनकेशरी’, ‘म्हेन्दोमाया’, ‘छोड्नै नहुने मौका’, ‘कुर्सी खाली छ’, ‘त्रिपाल’ लगायतका नाटकमा अभिनय गरिसकेकी छन् भने थुप्रै म्युजिक भिडियो र सर्ट फिल्म पनि खेलेकी छन् । वाइबाले नाटक ‘पेङदोर्जे’को लेखन तथा निर्देशन समेत गरेकी छन् । अहिलेका चर्चित रंगकर्मी एवं अभिनेता बुद्धि तामाङ ‘हैट’सँगै मिलेर निर्देशन गरेको यो नाटक राष्ट्रिय नाटक महोत्सव–२०७२ मा छानिएर उदघाटन नाटकको रुपमा मंचन समेत भएको थियो ।
फिल्ममा उनको अभिनय यात्रा भने सन् २०१२ मा छोटो फिल्म ‘सेलफोन’बाट शुरु भएको हो । फूलमान वलको निर्देशन रहेको यो छोटो फिल्मले नेपाल अन्तराष्ट्रिय आदिबासी फिल्म फेस्टिभल– २०१२ मा अवार्ड पाएको थियो भने चीन, भारत, बंगलादेश, अमेरिका, क्यानडा लगायतका मुलुकमा आयोजित अन्तराष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलहरुमा सहभागिता जनाएको थियो ।
सेलो थिएटरकी संयोजक समेत रहेकी वाइवाले ‘सेलफोन’ पछि जापानी निर्देशक डा तोशिआकी इतोहको ‘माइ लभः प्रमिस फर काठमाण्डु’ र रवि डंगोलको फिल्म ‘ट्याम्पु ड्राइभर’मा पनि अतिथि भुमिका गरेकी छन् । साहित्यमा पनि कलम चलाउने उनको ‘सोनामको ल्होछार’ नामक बाल उपन्यास समेत प्रकाशित छ । हालैको भेटघाटमा उनी यसरी प्रस्तुत भइन्–
के के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले ?
अहिले त फिल्म ‘नीरफूल’को सुटिङमा व्यस्त छु । अरु केही फिल्महरुबाट अफर आइरहेको छ,, तर यही प्रोजेक्ट नसकेको हुनाले ‘पाइप लाइन’मा राखेकी छु । डिसिजन दिइसकेको छैन ।
कहिले सकिन्छ ‘नीरफूल’को सुटिङ ?
अब थोरै मात्रै बाँकी छ । मेरो बिचारमा ५ दिनको सेडुल बन्छ होला अब । धादिङको रुबी भ्यालीमा २१ दिन र काठमाडौंमा २५ दिन सुटिङ भयो । अब काठमाडौंको मात्रै थोरै बाँकी हो ।
दयाहाङसँग काम गर्दा कस्तो अनुभव भयो ?
उहाँसित पहिले पनि स–साना काम त गरेकै थिएँ । लार्ज स्केलमा भने यही फिल्ममा गरेकी छु । मलाई सबै भन्दा बढि उहाँको बौद्धिकता मन पर्छ । कला क्षेत्र बाहेक समाज, राजनीति र बाहिरी दुनियाँबारे उहाँसँग गहिरो ज्ञान छ । धादिङको रुबी भ्यालीमा पनि निर्देशक फूलमान वल र दयाहाङ दाईहरुको टोली फुर्सदको समय आगो ताप्दै समाज, राजनीति र दर्शनका कुराहरु गरिरहनु हुन्थ्यो । बाटो हिँड्दा पनि उहाँहरु त्यस्तै गम्भीर बहस गर्नुहुन्थ्यो ।
व्यक्तिगत रुपमा भने मैले उहाँबाट चरित्रप्रतिको इमान्दारिता सिकेकी छु । कुनै पनि चरित्र गर्नुभन्दा अघि त्यो चरित्रमाथिको रिसर्च, उसको व्याकस्टोरीदेखि रहन सहन र साइकोलजीसम्म उहाँ गम्भीर रुपमा अध्ययन गर्ने कलाकार हुनुहुन्छ । उहाँसँग काम गर्दा त्यस्तो कुनै अफ्ठ्यारो लागेन । उहाँमा ठुलो मान्छे हुँ भन्ने घमण्ड छैन । जोसुकैसँग सजिलै घुलमिल हुनसक्ने उहाँको स्वभावबाट हामीले सिक्नुपर्छ ।
नाटकमा धेरै अघिदेखि हुनुहुन्थ्यो, फिल्ममा किन ढिलो ?
नाटकमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास मात्रै गरेकी हुँ । खासै ठुलो योगदान दिन सकेकी छैन । फिल्म पनि त्यस्तै हो । हाम्रोमा फिल्मलाई समाजको कथा भन्ने कलाको उत्कृष्ट माध्यम भन्दा पनि सस्तो मनोरन्जनको माध्यम मात्रै ठानिएको छ । धेरैजसो फिल्महरु यसरी नै बनेका छन् । त्यही भएर गम्भीर फिल्म चाहनेहरुका लागि प्रोजेक्ट नपाइन पनि सकिन्छ ।
यसको मतलब तपाइँ गम्भीर फिल्म बढि रुचाउनु हुन्छ ?
हो, हाम्रो समाजलाई अहिले सस्तो मनोरन्जन भन्दा पनि गम्भीर फिल्महरुको आवश्यकता छ ।
तपाइँको सबै भन्दा मनपर्ने फिल्म कुन हो ?
चिनियाँ निर्देशक झाङ यिमुको फिल्महरु बढि मनपर्छ । पछिल्लोपटक उहाँ ‘कमिङ होम’ हेरेकी थिएँ । यसमा मलाई अभिनेत्री गोङ लीको अभिनयले निकै छोयो ।
नेपाली फिल्म चाहिँ ?
नेपाली फिल्महरु पनि हेर्छु । तर, अहिले मन परेको फिल्मको नाम चाहिँ नभनुँ होला । पछि भनुँला नि ।
‘नीरफूल’ कस्तो फिल्म हो ?
अहो, यो त निर्देशकलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न पो आयो । एउटा कलाकारको हैसियतले भन्नुपर्दा त हाम्रो देशलाई अहिले चाहिने ‘नीरफूल’ जस्तै फिल्म हो जस्तो लाग्छ । भुकम्पपछिको समाजको यथार्थलाई फिल्ममा देखाउने खोजिएको छ । यो फरक धारमा अन्तराष्टिय स्तरको व्यवसाहिक फिल्म बन्नेछ भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ । हामी सबै टिमले त्यसरी नै काम पनि गरेका छौं ।
सुटिङको अनुभव सुनाउनुस् न ।
धादिङको रुबी भ्यालीलाई कहिले पनि भुल्दिनँ । समुन्द्री सतहबाट ३८ सय मिटर उचाईको रुबी भ्याली हामीले निकै दुःख पायौं । पिउने पानीको समस्यादेखि बाटोको अफ्ठ्यारो । गत साउनमै पनि हामी गएका थियौं र मौसम विग्रेकोले सात दिन पछि फर्केका थियौं । यसपटक चाहिँ १४ दिन बस्यौं । काठमाडौं फर्किंदा हामी सबैको अनुहार चिसोले कालै हुनेगरि डढेको थियो ।
रमाइलो पनि भयो होला नि ?
रमाइलोको त कुरै छोडौं । सुन्दर दृष्य, हिमाल, फूलै फूल देखिने वन पाखा । भेंडीगोठमा आगो ताप्दै भेंडाको दुध पियौं । सेल्फी खिच्यौं ।
भावी योजना बताउनुस् न ।
‘नीरफूल’ सकेपछि केही समय आराम गर्छु । केही आत्मसंस्मरण र उपन्यासहरु किनेकी छु, पढ्न पाएको छैन । त्यसपछि मात्रै भावी योजना बनाउँछु ।